Akon'ny RuNet · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Tantara tamin'ny Akon'ny RuNet tamin'ny Jolay, 2012
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Jolay 2012
Tamin'ny 6-7 Jolay, maherin'ny 170 ireo olona namoy ny ainy tamin'ny tondradrano nandrava tany atsimon'i Rosia. Niady hevitra ireo mpitoraka blaogy momba ny mety nahatonga izany loza izany tany amin'ny Krymsk - faritra voa mafy; maro ireo efa any amin'ny maha-mpirotsaka an-tsitrapo na mpanao gazety, ary maro amin'ireo adihevitra amin'ny aterineto koa no mifototra amin'ny ezaka fanavotana.
Rosia: Tolotra Amin'ny Finday Hampifandraisana Ireo Mpandeha & Mpitondra Fiara
Eoropa Afovoany & Atsinanana 02 Jolay 2012
Tsy mampandany vola sy fotoana ny tolotranà finday anaty aterineto Yeehay! raha mikaroka sy mangataka fiarakaretsaka ianao, ary miteraka vokantsoa amin'ny tontolo iainan'ireo tànana Rosiana feno setroka amin'ny alalan'ny fampifandraisana ireo mpandeha sy mpitondra fiara izay mety tsy nifandray mihitsy raha tsy nisy izany.